Ny IPhones 4s dia efa manondro ny fifandraisana 4G | Vaovao IPhone
Ny IPhones 4s dia efa manondro ny fifandraisana 4G
Minitra vitsy lasa izay dia natolotr'i Apple ho an'ny mpampiasa azy rehetra ilay iOS 5.1 vaovao miaraka amin'ny zava-baovao izay tsy azontsika atao ny tsy hilaza azy ary misy fiantraikany amin'ireo olona rehetra izay monina any Etazonia ary manana AT&T iPhone. Manomboka izao dia hiova ny fifandraisana 4G miankina amin'ny hoe ny mpampiasa dia eo amin'ny faritra voaomana ho 4G.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy ny fanambarana avy amin'i Apple manazava io fanovana io ary tsy fantatray koa hoe rahoviana izany no hitarina amin'ireo orinasan-telefaona hafa. Dingana iray noraisina hiaraka amin'ny fahatongavan'ilay iPad vaovao miaraka amina fifandraisana LTE marina. Vonona ny iOS 5.1 hampiseho ny sary masina 4G eo amin'ny efijery retina amin'ilay takelaka Apple vaovao.
Ireo mpandraharaha an-tariby dia tsy maintsy mametraka ny batterie hanatsarana ny fotodrafitrasa sy hifanaraka amin'ny fahatongavan'ny 4G, fifandraisana izay avo folo heny noho ny 3G. Antenaina fa amin'ity fomba ity dia hihatsara ny olan'ny fifandraisana tsy tapaka any amin'ireo tanàna lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 4S » Ny IPhones 4s dia efa manondro ny fifandraisana 4G
Fantatra ve raha hampidirina ao anaty iphone 4 koa izy io?
Robinson dia hoy izy:
Ary ny iPhone 4S dia manohana ny 4G ??
Valiny tamin'i Robinson
Juanki dia hoy izy:
Buenoooooooo, satria amin'ny krizy iainantsika (sy ny sisa tavela hitranga !!!), satria maharitra fotoana fohy vao ahitantsika "4G" aseho eo amin'ny efijery an'ny iPhones 4s antsika
Tsy mino aho fa ireo mpandraharaha (farafaharatsiny eto "Las Españas") dia miroborobo - miteny an-dàlana - hanovana fotodrafitrasa ankehitriny…. Ary betsaka kokoa izao (ankilabao ny krizy), ny olona manomboka mahita ny hatsaran'ny "orinasa madinidinika" (Simyo, Pepephone, sns), izay nisy fiatraikany ratsy tamin'ny tombotsoan'ireo orinasa "lehibe" (sy mpangalatra!)
Na izany na tsy izany, tsy maintsy miandry isika ... Inona no vahaolana ...
Valiny tamin'i Juanki
chicote69 dia hoy izy:
Tsy azoko. Ny 4S dia tsy tokony ho 4G.
Valiny amin'ny chicote69
EthanH dia hoy izy:
Tsy azoko, ny iphone 4s dia tsy tokony hanohana ny 4G ka tsy azoko tsara ity vaovao ity, mba hahitana raha misy afaka manazava izany amintsika.
Valiny amin'i EthanH
Mauro goya dia hoy izy:
Ho an'ireo izay nilaza fa tsy azony ... dia nanao hypothèse an'io aho, satria ny iPhone 4S dia misy fifandraisana HSDPA + (antsoina matetika hoe 3.5G na 3G turbo), amin'ny telefaona finday maro, rehefa mifandray amin'ny HSDPA amin'ny satan'ny izy. dia miseho ny «H" izay manondro fa mifandray amin'ilay tambajotra izy, etsy ankilany, ao amin'ny iPhone 4S dia tsy nitranga izany, rehefa nifandray tamin'ny tambajotra voalaza teo aloha ianao, dia nitohy niseho ny "3G". izay nataon'ireo avy any Cupertino dia ny niantso ny fifandraisana HSDPA ho fifandraisana 4G. Satria na dia fantatsika aza, ny iPhone 4S dia tsy miaraka amin'ny teknolojia LTE, na ny teknolojia mamela azy hifandray amin'ny 4G. Avy eto aho dia nanatsoaka fehin-kevitra roa momba ny antony tsy tian'izy ireo hampiditra ny litera "H", niditra "4G" aho izay midika hoe mifandray amin'ny HSDPA ianao.
Famaranana voalohany: Azo antoka fa tsy tian'izy ireo ny fijerin'ny "H" ary tian'izy ireo ny nametraka ny "4G" satria lafo vidy kokoa io (ankoatr'izay dia nahita horonan-tsary momba ny Samsung izahay
Valiny tamin'i Mauro Goya
Manana 4G ve ny 4S amin'izay? Naheno foana aho fa tsia, izany hoe, raha manatsara ny fotodrafitrasa i Movistar, afaka mampiasa ny iPhone 4S amin'ny 4G ve izy io na mandra-pahatongan'ny modely manaraka izay ividianany ahy, tsia? Toa hafahafa be amiko ny zava-drehetra xD
Famaranana voalohany: Azo antoka fa tsy tian'izy ireo ny fijerin'ny "H" ary tian'izy ireo ny nametraka "4G" satria lafo vidy kokoa (ho fanampin'izany dia nahita horonantsary momba ny Samsung mihomehy izahay fa tsy nanana fifandraisana 4G ny iPhone
Fehiny faharoa: angamba ny Apple dia tokony hampino ny olona fa misy fifandraisana 4G (rehefa tsy marina izany) ka mahasarika ny sain'ny olona.
Nefa tadidio fa ny 4G dia tsy hisy velively amin'ny iPhone 4S satria tsy manana teknolojia hifandraisana amin'ilay tamba-jotra voalaza izy io, tsy inona izany fa ny fifandraisana HSDPA, antsoina hoe 4G (izay tsy izy)
vampkiller dia hoy izy:
Manana 4G eo amin'ny efijery izy ireo satria izany ilay antsoin'ny orinasa AT&T ho tambajotra 3.5G ary tsy mametraka H toy ny any amin'ny orinasa hafa fa ny 4S dia tsy manohana ireo tambajotra 4G marina ary tsy fahadisoan'i Apple ny mametraka 4G amin'ny efijery iPhone ... ………………… Tsy haiko raha hahazo 4G amin'ny efijery koa ny iPhone 4 satria manohana tambajotra 3.5 G ihany koa
Mamaly an'i vampkiller
Manana ny antony rehetra ianao, ny iPhone 4s dia tsy manana teknolojia hanohanana ireo tambajotra 4G marina. Ary momba ny iPhone 4, tsy haiko raha manohana ny fifandraisana HSDPA izy ireo.
Ny iPhone 4 dia manana HSDPA.
Mamaly an'i rene
Ho antsika izay monina any Espana dia tsy maninona na manana LTE na tsia, tsy mino aho fa hametraka azy ity amin'ity taona ity na hiasa araka ny tokony ho izy, farafaharatsiny miaraka amin'i Movistar.
Skeptic_ramirez dia hoy izy:
Raha manohana 4g amin'ny dia any Etazonia izy dia naka 4g ny iPhone fa tsy nisy olana
Valio amin'i Skeptic_ramirez
tovovavy manetry tena dia hoy izy:
tsy maimaim-poana wassap ipho4
Valiny amin'ny tovovavy manetry tena
ay handoa amin'ny iPhone4 wasap ary tsy mino aho fa tena tsara kokoa ny texplus
ay mandefasa lahatsoratra sy yamada maimaim-poana
Samsung manafika ny iPad Vaovao miaraka amin'ny latabatra fampitahana
WhatsApp dia nohavaozina amin'ny endrika vaovao maro